Ndị otu egwuregwu bọọlụ Subaru na MLS na-anabata ndị ọbịa ọhụrụ mee ememme ụbọchị nkịta
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ndị otu egwuregwu bọọlụ Subaru na MLS na-anabata ndị ọbịa ọhụrụ mee ememme ụbọchị nkịta
Subaru nke America, Inc. taa kwupụtara na na mmekorita ya na Philadelphia Union, onye na-emepụta ụgbọala ga-akwado ihe omume a na Sunday, October 24, raara onwe ya nye inye nkịta na mpaghara Philadelphia ka ukwuu ụbọchị ndụ ha.
Akpọrọ ya “Mee Ememme Ụbọchị Nkịta,” ihe omume a na-ewe ogologo ụbọchị na-akpọ ndị hụrụ nkịta n'anya, ndị nwe nkịta na ndị otu anụ ụlọ na mpaghara Subaru Park, ebe obibi nke Philadelphia Union, iji mee mmemme ndị enyi ha na-ewe iwe. Maka ndị na-achọ ịkpọrọ enyi nke onwe ha iwe, Mee Fest Day Dog ga-agụnye ihe ngosi nkuchi nkịta na mmekorita ya na ụlọ ọrụ anụ ụlọ. Ndị ọbịa nwere ike izute ihe karịrị 100 nkịta dị maka nkuchi * ma ọ bụrụ na ha nwere mmasị ịnye ụlọ na-ahụ n'anya maka anụ ụlọ, a ga-ekpuchi ụgwọ nkuchi. Ihe omume a ga-egosipụta, nri, egwuregwu, ihe ngosi na nkịta nkịta dị otu maịl ebe ụmụ nkịta nwere ike ịgba ọsọ, na-eje ije na ịkụ aka iji nweta ihe nrite.
"Onye ọ bụla nwere nkịta maara na ha na-aga n'ihu na-eme ka ụbọchị anyị dịkwuo mma. N'afọ a, anyị nọ na Subaru kpebiri iweghachi ihu ọma site na ụbọchị ewepụtara maka ịkpa oke na iso ụmụaka nwee ntụrụndụ na Subaru Park, "Alan Bethke, onye isi osote onye isi ahịa ahịa, Subaru nke America, Inc. kwuru. ụbọchị anyị na ndị enyi anyị - mmadụ na nkịta - na mpaghara Filadelfia ka ukwuu ma gbaa ndị ọ bụla na-achọ nkịta ume ka ha kwụsị ma zute ezigbo enyi ọhụrụ nwere ike. "
"Dabere na ihe ịga nke ọma sitere na mmemme nkuchi nkịta n'ụbọchị egwuregwu Union, anyị maara na ịme ụbọchị Dog's Day Fest ga-abụ ihe mgbawa maka ndị hụrụ nkịta na anụ ụlọ n'anya," Tim McDermott, Onye isi oche Philadelphia Union kwuru. "Dịka ọgbakọ nwere uche nke mbụ, ọ dị anyị mkpa ịchọta ụzọ anyị ga-esi nyeghachi ma melite ndụ nkịta na ezinụlọ na mpaghara Philadelphia."
Mee a Dog's Day Fest ga-eme na Subaru Park (2502 Seaport Dr. Chester, PA 19013) n'etiti 10a.m. EST na 4pm EST. Ndị nwere mmasị ịga ga-edebanye aha tupu ha erute na philadelphiaunion.com/form/subaru-dog-day-fest.
Ihe omume Mee a Dog's Day Fest bụ akụkụ nke automaker's Subaru Loves Initiative, nke a raara nye nyere aka ịkwado anụ ụlọ nọ na mkpa.
*Nkuchi nkịta enweghị ike ime na saịtị na Subaru Park na onye ọ bụla nwere mmasị ịnakwere nkịta ọ bụla nọ na saịtị ahụ ga-aga ebe nchekwa ụlọ anụ ụlọ iji mezue usoro nkuchi.
Hotellọ azụmaahịa azụmahịa na Spa kacha mma na Taipei, Taiwan
E jidere ndị njem nlegharị anya Russia na Turkey maka ịmalite...
Ọmụmụ CDC dị ịtụnanya ka ewepụtara na arụmọrụ nke...
Mmadụ anọ nwụrụ, 19 merụrụ ahụ na oke mmiri ozuzo Istanbul
Onye dike WTN ga -eduga njem nlegharị anya Barbados: Jens Thraenhart ...
Na -azaghachi koodu Red Climate ihu igwe ugbu a
Otu ụgbọ elu LATAM na-ewepụta atụmatụ nhazigharị ugbu a…